IINGCEBISO ZOKUTSHAYA |
ngomphathi ku 20-11-13
Xa ucheba imilenze, ikhwapha okanye indawo yeebikini, ukuthambisa amafutha ngendlela efanelekileyo linyathelo lokuqala elibalulekileyo. Ungaze uchebe ungakhange uthambise iinwele ezomileyo ngamanzi, njengoko iinwele ezomileyo kunzima ukuzisika kwaye uzophule umda omhle wencakuba. Ibhleyidi ebukhali ibalulekile ukuze usondele, ukhululeke, ukucaphuka -...
Ukucheba ukutyhubela iminyaka
Ukuba ucinga ukuba umzabalazo wamadoda wokususa iinwele zobuso yinto yanamhlanje, sineendaba zakho. Kukho ubungqina bezinto zakudala bokuthi, kwiLate Stone Age, amadoda achetywa ngetshe, i-obsidian, okanye i-clamshell shards, okanye ii-clamshells ezifana ne-tweezers. (Ouch.) Kamva, abantu bazama ubhedu, iphoyisa ...
Amanyathelo amahlanu okucheba kakhulu
Ukucheba okusondeleyo, okufanelekileyo, landela nje amanyathelo abalulekileyo. Inyathelo loku-1: Hlamba isepha efudumeleyo kunye namanzi aya kususa ioyile kwizinwele zakho kunye nolusu, kwaye iya kuqala inkqubo yokuthambisa i-whisker (kungcono kube kunjalo, cheba emva kokuhlamba, xa iinwele zakho zigcwele). Inyathelo 2: Thambisa iinwele zobuso zezinye ze ...